Arts & Humanities » ကွကိုယ်လုပ် – DIY	57
ခု အငြိမ်းစား ယူသွားတဲ့ နံပတ် ၂ ရဲ့ မွေးရပ်မြေကို ပြောင်းရတုန်းကပေါ့လေ။ ပြောင်းတုန်းက ကိုယ်က ၁၀ တန်းဖြေပြီး ချိန် လိုက်သွားတယ်။ နောက်တော့ သင်တန်းပြန်တက်လိုက် ပြန်လာလိုက်မှာ တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန် အိမ်မှာ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက် ရှိနေပါရောလားး
မွေးမေလေ့က ပြန်ဖြေတယ်။ သူ့ ညာ လက် ရုံး တဲ့။ ဘုရား၊ဘုရားးး!!!!
ငင်၊ ဘာတွေတုန်းးး။ စမြင်လိုက်တော့ မီးဖိုခန်းထဲ မွေးမေလေ့က ချက်နေတုန်း သူက ငုတ်တုတ်ထိုင် ဆေးလိပ်ဖွာနေတာ မြင်တာပဲ။
တခါသား မွေးမေလေ့ မန်းလေး သွားတုန်း ကိုယ်နဲ့ ထားခဲ့တာ ပြန်လာတော့ ငိုပြီး တိုင်သတဲ့။ မမလေး (သူက မွေးမေလေ့ထက်ကို ၁၀ နှစ်ကျော် ကြီးတာကို အဲလို ခေါ်တယ်) သမီးက တအားခိုင်းတတ်လို့ နောက်တစ်ခါ မထားခဲ့ပါနဲ့တဲ့။ ခိခိခိ၊ သများ ပညာပေးလိုက်တာ။
သူက ကိုယ့်ကို ချစ်သမားး၊ သူ ကိုယ်တိုင်က အကွက်မြင်၊ လာဘ်မြင်လွန်းလို့ နည်းနည်း ခိုင်း ရင် အလုပ် များများပြီး တာ။
“တွေ့ပြီမလား နာ့ ဘယ်လက်ရုံး အတွေးအခေါ်ရော အပြောအဆိုရော နည်းနည်း သာ ပညာတတ်ရင် နိုင်ငံခြား ရောက် လောက် ပြီ” ပြီး ရင် တဟားဟား ရီ နေရောပဲ။
တောင်ပေါ်သား says: တော်ချက်ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဘူ့ ကို ပေါဒါရဲငင်???
Ma Ei says: ရေသန့်ဗူးခွံနဲ့ အပင်ကလေးတွေ စိုက်ထားတာ ကြိုက်လို့ကိုယ်လဲစိုက်ကြည့်ဖူးတယ်… သူတို့လို ခြံထဲရှင်းသန့်မနေတော့ အလှဆင်တာနဲ့ မတူ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဟိဟိ..
Wow says: ကားတာရာနဲ့ အပင်တွေစိုက်ထားတာကတော့လှဒယ်အေ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အေးးးဆို
လုပ်ငန်းး စ ရအောင် အလုပ်ထဲ တာရာတွေ တစ်နေ့ တစ်ခု ဖွက်ယူခဲ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
aye.kk says: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက…
ခင်ဇော် says: မှတ်စရာတွေ အများးကြီးး ပါလို့ စိမ်းးလိုက်ပါတယ် တီအေးးရေ..
အောင် မိုးသူ says: တာယာနဲ့ကတော့ အရင်ကတည်းက ကြက်ဟင်းခါးသီးပင် ဘူးသီးပင်စိုက်ဖူးတယ်။ ရေသန့်ဗူးနဲ့လည်းစိုက်ဖူးတယ်။
ခင်ဇော် says: ပို့စ်တင်ပေးး ပါ အူးးး မိုးးသူ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . လှလိုက်တာ ဇီရေ။ ခုမှပဲ မြင်ဖူးတော့တယ်။ နောက်ဆို ဘူးခွံတွေ လွှင့်မပစ်တော့ဘူး။ ကြည့်စမ်း၊ အနုပညာဟာ အမှိုက်တွေကိုတောင် လွှမ်းမိုးနေပါကလား !!
ခင်ဇော် says: အမှိုက် ဆို တာ ထားးတတ် ရွှေ …
aye.kk says: ကျန်ခဲ့သေးလို့တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးပြောချင်တာ …
ခင်ဇော် says: ထပ်စိမ်းးလို့ မရတော့ ပေမယ့် နည်းးတွေ မှတ် ထားး ပါပြီ တီအေးးရေ…
lu lu says: အနုပညာမြောက်လိုက်တာ လိုက်လုပ်ကြည့်တော့မယ်
ခင်ဇော် says: တနိုင် ပေါ့ လုလုလေးးရေ..
aye.kk says: ဖတ်လို့လည်းကေါင်းလိုက်တာ။
ခင်ဇော် says: ပင်တိုင် အားပေးးနေတဲ့ တီအေးးး ကို ကျေးးဇူးးးတင်ပါတယ်..
Ma Ma says: လှလိုက်တာ။
အဲလို reuse, recycle မျိုးဆို တီဒုံဦးဆောင်သော တီမမ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းသည့် ဂေါက်အသင်းကြီးရဲ့ အကြိုက်ပေါ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အဲဒီ အသင်းကို သများးလည်းး ဝင်ရတော့ မလားး မသိ..
padonmar says: Like x1000000
ခင်ဇော် says: ဖတ်ဖူးးတယ် အာတီဒုံ..
ထောင့်စေ့ လိုက်တာ ဆိုတာလေ အတုယူစရာပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 138
​ဒေါ် လေး says: 1) ငယ်ငယ်က အဖေက ထီဆိုင်ဖွင့်တော့ စက္ကူအိပ်တွေ အစ်မအေး နဲ့ အစ်မဒုံ ပြောသလိုဘဲကပ်ခဲ့ရတယ်…ထီထိုးတဲ့လူတွေက လည်း အတိတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ ရှင်ပြုရန်တို့ မင်္ဂလာ ဆောင် ရန်တို့ ရေးခိုင်းကြတယ် ပီးရင် အဲစက္ကူအိပ်လေး နဲ့ထည့်ပေးရတယ်…
ခင်ဇော် says: အဟုတ်ပါ့ ဒေါ်လေးရယ်။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: DIY ဆိုလို့ စိတ်ထဲစွဲနေတဲ့ DIY တခု ဖောက်သယ်ချပျဇီ။
ရီဆိုင်ကယ်တော့ မဟုတ်ဘူး… ဆိုင်ခန်းတွေ လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး ဆိုင်းဘတ် stand လုပ်တာမယ်လေ…
ခင်ဇော် says: အေးဟဲ့။
ကူမားရ် says: ဟိုတစ်ပိုစ့် ထဲကမန့်ချင်တာ မအားလို့ မမန့်လိုက်ရဘူး
ခင်ဇော် says: တီအေးးတောင် ၂ ခု လုံးး စိမ်းးဖို့ မဖစ်နိုင်တာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကူးမားရ် (ခ) ဗေးတား(ခ) အဘဆွေ ကလဲ
မြစပဲရိုး says: ကွကိုယ် လုပ်ဖူးပါ့ ဇီကလေးရယ်။
ခင်ဇော် says: ကိုယ့် ပတ်ဝန်းးကျင်နဲ့ နီးးစပ်ရာ ယူ ရတာပဲ…
aye.kk says: ဒေါ်လေးပြောလို့သတိရတယ်။
ခင်ဇော် says: ကျော် ဝယ်ဖူးတယ် တီအေးရေ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အနော် အရမ်းသဘောကျတာ.. မမကြီးရဲ့… အဟောင်းတွေ ပြန်သုံးရတာမျိုးတွေ.. ဟန်းမိတ်လုပ်ရတာမျိုးတွေ သိပ်ကြိုက်တာ.. ခုလို စုပေးတာ ကျေးကျေး…
ခင်ဇော် says: အချိန်ရရင်တော့ လုပ်ပျော်တယ် လုံမလေးရဲ့။
ဦးကျောက်ခဲ says: ကားတာယာအဟောင်းတွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု Bolt နဲ့တွယ် ၊ အထဲမှာ မြေစေးဖြည့်ပြီး…
Sustainable Development မှာ Recycling က အဓိက အရေးပါသပေါ့ကွယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ခု မှသိတယ်။
Ma Ei says: ယောက်လမ်းမှတ်တိုင်နားကစားသောက်ဆိုင်ရှေ့ တစ်ဘက်လမ်းဆင်ခြေလျှောကို
kai says: အိမ်မှာ.. ကြိုးတွေတော်တော်ရှုပ်နေတာမို့.. ပါမုန့်အိပ်ညှပ်ပိတ်တာလေး..သုံးတာကိုမှတ်သွားတယ်…။
ခင်ဇော် says: ပုလင်းးတွေ ကို ဒီနည်း နဲ့ ဖြတ်လို့ရ
Mike says: .နောက်ကျနေပီဂျာ…
ခင်ဇော် says: လာအားပေးလို့ ကျေးကျေးပါ မိုက်မိုက်ရေ
Ma Ma says: အမကြီးကို ဒီပိုစ့်လေး ပေးဖတ်လိုက်တာ သဘောကျတယ်ဆိုလို့ မန်ဘာဝင်ပြီး မန့်ပါလားလို့တောင် ဆွယ်လိုက်သေးတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဟင်းချက်ကောင်းသူ တစ်ယောက် တိုးလာတော့ မား ဟင်??
nozomi says: အဲဒါလေးတွေ က စိတ်ဝင်စားဘို့လဲကောင်း တကယ်လဲ အသုံးတည့် သဗျ သားတော်မောင် ကလဲ အဲဒါမျိုးလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်
ခင်ဇော် says: တညားး သင်ပေးး မယ်လေ
မောင်ရေးးး ကို…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Alinsett @ Maung Thura says: တစ်ခုခုတော့ လုပ်အုန်းမှပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: DIY နော် …
မွသဲ ( 17082011 ) says: သများရီဆိုင်ကယ်ကတော့ အဟောင်းလှည်းမျှော်ရတာပဲတနေ့တနေ့ ခိခိ။ ငယ်ငယ်ကတော့စုံနဖာစိအောင်လုပ်ဖူးဒယ် မှတ်တမ်းမှတ်ရာမကျန်ခဲ့တာနှမျောမိတယ်။ တကယ်ဆို သများငယ်ငယ်ကတဲကဖုန်းပေါ်သင့်တာနော် ကားတာယာနဲ့အပင်စိုက်တာတော့ ဟိုနေ့ကလမ်းလျောက်သွားရင်းတအိမ်မှာတွေ့ခဲ့လို့ ဒီတခါတာယာလဲရင်အပင်စိုက်မယ်လို့တေးထားခဲ့သေး။ နောက်နေ့မှလူလစ်ရင်ဒါ့ပုံရိုက်ယူခဲ့မယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟို bookmark ချိုးး နည်းးလေးးး သိချင်
မွသဲ ( 17082011 ) says: ပေးမယ်မနက်ဖြန် ပြန်ရှာရအုံးမှာမို့ ခိခိ
ကြည်ဆောင်း says: အကုန် Copy ကူးပြီးမှတ်သွားတယ်